Mogadishu Journal » Dibadbax looga soo horjeedo dowladda oo xiligan ka soconaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay
Mjournal : — Wararka xiligan naga soo gaaraya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa sheegaya in dibadbax ballaaran oo ay soo qaban-qaabiyeen odayaasha iyo waxgaradka gobolka xiligan uu ka soconaya magaalada Baydhabo.
Dibadbaxayaasha ayaa lagu waramayaa in ay siweyn uga soo horjeedaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo hishiiska Arbacadii aynu soo dhaafnay lagu gaaray magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya kaa oo dhaxmaray dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland.
Dibadbaxan ka soconaya magaalada ayaa waxaa soo abaabulay waxgaradka iyo aqoonyahanno ka tirsan kuwa deegaanka, iyadoo ay ka qaybgalayaan dadweyne fara badan oo isugu jira rag dumar iyo caruur.
“Isku soo baxa waxaa uga soo horjeeda dowladda federaalka Somaaliya oo dhawaan hishiis kula gashay Addis Ababa maamulka Jubbaland,” ayuu yiri nabadoon Cali Shiine.
Dadka isku soo baxay ayaa sita boorar ay ku qornaayeen hal ku dhegyo ay uga soo horjeedaan dowladda federaalka Soomaaliya, iyaga oo sheegay in shacabka ku dhaqan gobollada Bay iyo Bakool wax xiriir ah la yeellan doonin dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Hishiiskii Arbacadii aynu soo dhaafnay ku dhaxmaray magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya dowladda federaalka Soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan looga fal-celiyay ama looga jawaabay, waxaana jiray siyaasiyiin iyo waxgarad ku tilmaamay hishiiskaas in uu ahaa mid sharci darro ah oo ay dowladdu ku gaftay.
Wararka ayaa waxay sheegayaan in deegaanno kale oo ka tirsan gobollada Bay iyo Bakool ay ka socdaan dibadbax midkan la mid ah, iyadoo tani ay ku noqonayso dowladda caqabad kale oo kasoo wajahday gobollada Koonfureed ee Soomaaliya.